Urongwa hutsva hunopomera kupa mwana foni kuti awane zvinonyadzisira - xnxx - TELES RELAY
HOME » mwe Urongwa hutsva hunopomera kupa mwana foni kuti awane zvinonyadzisira - xnxx
Chimwe chirevo chepamutemo chinoshandiswa chinoita kuti chive mhosva zvakadai sokupa mwana chero kombiyuta kana foni inokwanisa kukwanisa kuona zvinonyadzisira muSouth Africa.
iyo chete nzira inobatsira yekuchengetedza vana kunze kwekuona zvinonyadzisira, maererano nekunyatsodzidza kweMutemo Reform Commission yeSouth Africa.
Kune vanhu vakuru, kupinda kune zvinonyadzisira kunoda kuiswa kwechidimbu chekuzivikanwa uye kukora kwayo mune rimwe bhuku.
Kunyange kana chikumbiro chacho chichigamuchirwa sezvo chakamira, hachizove chakasimba sezvinopomerwa nevatongi uye vamwe vangada kuzviona-kusanganisira kubvisa zvinonyadzisira kunze kwevakuru vakuru.
Kune mamwe nyaya, ona Business Insider. SA .
Kana Paramende inobvuma chirevo kubva kuMutemo Reform Commission (SALRC), hutsotsi hutsva huchagadzirwa kuSouth Africa: kupa mwana foni foni inogona kuwana Indaneti pasina kuona zvinonyadzisira. blocker panzvimbo.
Vachigadziri veSppp Maonesheni aizonyatsotarisirwa, asi mumutauro wakakura, mutemo unoshanda kune chero munhu "kupa mwana" ane chigadzirwa chakadai kana kuti achibvumira "kugovana" nechigadzirwa chakadaro. Izvi zvinogona kusanganisira, somuenzaniso, munhu mukuru achipa foni nemwana kuti atambe nayo.
Chivi ichocho chaizova mhosva yakakomba, iyo inenge yakangofanana nekuratidza mwana izvo zvichatumidzwa mune remangwana "child pornography material". , mune imwe shanduro inoshandiswa, asi ikozvino inozivikanwa mumutemo sevana vana zvinonyadzisira.
Panguva imwecheteyo, tsanangudzo yezvinonyadzisira yaizowedzerwa kuvhara mifananidzo nemavhidhiyo e "tsanangudzo kana kuti zvepabonde", kunyange kana "isingaiti kuti munhu ashushikane" -kubviswa kwekudzivirirwa ikozvino kunobata zvidzidzo zvepabonde zvepabonde
Kuti udzivise hutsva uhu hutsva, vanogadzira vangangodaro vanoisa zvinonyadzisira pazvinhu zvose zveIndaneti-zvinobatanidzwa zvinotengeswa muSouth Africa. Vakuru vanogona kuva nechisarudzo chekuvhara mabhenji aya nekuongorora makore avo neAdhi. Asi ani naani anobvisa kuvhara kwakadaro, zvakadai semuumbi wezvigadzirwa kana mushambadziri webasa, anenge achida kuchengetedza zvinyorwa zvakazara zvekushanda ikoko.
Izvi zvingaita kuti zvinyorwa zvevanhu vekuSouth Africa vanoda zvishoma simba rekuona zvinonyadzisira, nenzira imwecheteyo iyo UK ikozvino inogadzira urongwa hwakadaro pahuwandu hwevashandi vepaIndaneti.
Onawo: Zvinonyadzisira zvakavharwa muUnited States yose. Ndicho chikonzero nei vanhu vachifunga kuti inotyisa pfungwa.
Asi zvinogona kunge zvakanyanya kuipa kune vatevedzeri vezvinoshambadzira, uye avo vanofunga kuti vanofanira kukwanisa kuwana rusununguko rusununguko rwezvinhu zvisiri pamutemo: kana kuti vakakunda. "Haisi mubvunzo we kuvhara minwe, kana kubvisa zvachose zvinonyadzisira paInternet.
Chirongwa chekuchengetedza vana kubva kune zvinonyadzisira pazinga rekushandisa chikamu chekugadzirisa kwakanyanya kwemitemo yezvepabonde inosarudzirwa neSARRC panguva yehurukuro. pepa rinopfuura mapeji e400. Bumbiro rezvematongerwo enyika rinozvimiririra rinopa Paramende inofunga nezvechinetso chekuona zvinonyadzisira paIndaneti uye pakupedzisira inogumisa kuti hazvibviri kutonga Indaneti yakazara.
Kunyange zvakadaro, anopedzisa kuti zvimwe zvinoda kuitwa kuti zvidzivise vana kuti vasatsvaga. zvinonyadzisira kana kugumburwa paIndaneti. Nokudaro, muchisarudzo chechigadziriswa chakakonzerwa pamapepa aro ekukurukurirana, SALRC inokurudzira chigadziriswa chisina kuvhara kudzivirira zvinonyadzisira.
Onawo: Zvinonyadzisa zvigaro zveSouth Africans zviri zvepamutemo chikamu chechipiri kudarika pasi rose
Kana ikashandiswa muhuwandu hwemazuva ano, chirongwa cheSARRC chinogona kuita kuti zvive mhosva kuparidzira mapurisa kushungurudza kuti munhu ari kuita foni dzemafoni dziripo kune vana kuti vasvike webhusaiti yezvinonyadzisira.
Iri ndiro basa rinoremedza zvikuru kumakambani emagetsi, pakati pezvimwe zvinhu, kuti ikozvino ndiyo nyaya. Mune mitemo yazvino, avo vanopa mitambo yepaIndaneti kuvana vanofanira kuita zvose zvavanogona kupa zvigadzidzo uye dzidzo kudzivisa kuona zvinonyadzisira.
Kunewo mazano ekuberekwa kwevabereki anopiwa neMTN uye Vodacom, tarisa SALRC, asi haibvumirwi nekutadza uye inogona kudziviswa.
Mamwe masangano, akadai seNational Prosecutor Authority (NPA), angada kuona zvakawanda kupfuura izvozvo. Purogiramu yekukurukura yePARRC inoratidza kuti, panguva yekunyorwa kwegwaro idzva rekutsvaga, zvinonyadzisira zvinofanira kuwanikwa muSouth Africa chete kubva kune mawebhusayithi ebhadharwa, uye chete kuburikidza nechisimba chechiometric fingerprint identification.
yakaenderera mberi, pamwe nevakadzi nevakadzi kurwisa kushungurudzwa kwevana vaduku, izvo zvinokurudzira kuti vashandi vepaIndaneti vabvise zvachose zvinonyadzisira, kuitira kuti zvinonyadzisira zvinongowanikwa mumabhuku ezvitoro.
Asi vashandi vepaIndaneti vanopa "havagone kugadzirisa zvinhu zvose," iro SALRC rakaguma rawana, uye "kune mhedzisiro yekwanisi yemaganho ekutendesa kuti vana havaonekwe zvinonyadzisira."
Asi, sangano rinopa mazano rinoti, angada kuona "internet yakachena yezvokudya" nokusingagumi, nekutsvaga vanhu vakuru, kuSouth Africa.
"Izvi zvinosanganisira dzose foni dzinoshandisa software iyo inodzivirira kuwana mafirimu ezvinonyadzisira." Zvinofungidzirwa kuti vashandi vane makore mashoma kupfuura 18.
Sangano re SALRC rinoramba rakasununguka kuvanhu kusvikira pakupera kwaJuly, mushure mokunge shanduro yekupedzisira inofanira kuendeswa kune hurumende yeRubatsiro yekuongorora.
Gamuchirai chimwechete WhatsApp mangwanani oga oga nezvose zvatava kuziva: click here .
Uyewo neBusiness Insider South Africa:
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.businessinsider.co.za/children-and-pornography-proposal-for-device-level-porn-block-in-south-africa-2019-5